I GI SPORTZ dia noforonin'ireo mpilalao taloha izay niaingan'ny paintball avy any anaty ala mamakivaky ireo hazo, mitsambikina bisy, mitsambikina amin'ny palmettos. Miaraka amin'ny fandaharan'asa natao hampitomboana ny traikefa amin'ny mpilalao baolina, dia ny fahatsapana fotsiny dia ny mampiray ireo mpilalao amin'ny lalao izay tiantsika amin'ny programa manerantany izay tarihin'ny mpilalao mpilalao mahafinaritra izay maniry ny ho ao anatin'ny fokonolona paintball.
Mpikambana GI SPORTZ
Aloavy ny famoahana ny $ 25 amin'ny alàlan'ny fanoratana anaty aterineto.
Mandray ny fomba amam-panao Velcro Hat, Tech T-Shirt, pataloha, karatra ID, ary lanyard.
Tombontsoa ho an'ireo mpikambana avy amin'ny Sampan-jiolahy Brigad
$ 10 amin'ny $ 20 fihenam-bidy amin'ny hetsika Major Brigade.
Ireo hetsika ireo dia aseho ho toy ny sonia fisehoan-javatra.
Tsy ny zava-mitranga rehetra amporisihantsika dia hanana fihenam-bidy.
Misy ny fikambanana brigade serivisy izay ahafahan'ny mambra hihaona.
Misy hetsika Patch Brigade izay hisy ny hetsika manokana ho an'ireo mpikambana 100 voalohany. Misy hetsika lehibe amin'ny Brigade miaraka amin'ny paty, na ny fidirana amin'ny fihenam-bidy, na ny fihenam-bidy ao amin'ny GI Booth na indraindray. Ny antsipirihany dia hasongadina ao amin'ny pejy Facebook amin'ny hetsika tsirairay.
Hetsika Patch Patch
Manangona paty miorina amin'ny lalao izay milalao.
Manangòna ​​Patch Global ho an'ny hetsika iray any amin'ny firenena 3 hafa.
Manangona paty Trifecta handehanana amin'ny hetsika 3.
Ahoana no fomba hamongorana ireo pataloha hahatongavana?
Mitadiava Olana ho amin'ny Achilles
Ireto manaraka ireto dia ny Patch Events.
Hafatra maimaim-poana ho an'ny mpikambana 100-200 voalohany izay mijery ny hetsika.
Dark Ops Extreme amin'ny Cousins - 25-Mar / 2018
CPX Zo - 3 / 23-25 / 2018
Lalao ofisialy ofisialy ao Texas - 3 / 24-25 / 2018
Vipers Texas Revolution ao amin'ny TXR - 4 / 14-15 / 2018
Vipers Wastelands ao amin'ny Avid Extreme Sports Park - 5 / 4-6 / 2018
CPX Living Legends 11 any amin'ny Afobe any amin'ny afobe - 5 / 18-20 / 2018
Ady amin'ny World 7 PB Explosion - 7 / 8 / 2018
Fifandirana ION - 7 / 15-17 / 2018
Ny reniranon'i Normandy White River PB - 7 / 20-22 / 2018
Lone Wolf Mena fotsy fotsy - 7 / 15 / 2018
KC Crusaders 24hr lalao - 8 / 25-26 / 2018
Ny mpankany afobe maneran-tany - 9 / 21-23 / 2018
Fanimbana goavana ataon'ny firenena - 9 / 29-30 / 2018
Vipers Tombstone ao amin'ny Avid Extreme Sports Park - 10 / 6-7 / 2018
Lalao mandihy Pandora - 10 / 13-14 / 2018
Clowns vs Zombies 8 PB fipoahana - 10 / 14 / 2018
Viper lalao TXR - 11 / 10-11 / 2018
Zana-jatony pb Tippmann Challenge - 9 / 2 / 2018
Mpikatroka OPL / Big game - 9 / 29 / 2018
Ady ho an'i Hoth - 2 / 4 / 2018
Miasa amin'izao fotoana izao isika amin'ny fampidirana ireo hetsika izay ahitana ny fihenam-bidy amin'ny fidirana.
Ny BPR dia fandaharan'asam-pamindram-po ho an'ny mpikatroka brigade, mpandresy amin'ny fifaninanana fanatanjahantena (fisafidianana mifandraika), ary fandraisana anjara amin'ny Penbol Ambassador (Commander).
Ny loka dia ahitana:
(2 mpandresy goavana) Aoka ho GI SPORTZ PRO.
Fandefasana fiaran-dalamby, hotely, sakafo, fidirana, rivotra, tranga loko iray ho anao sy ny namanao iray, amin'ny iray amin'ireo lalao tranainy lehibe indrindra. Ny mpandresy ihany koa dia mandray kitapo miaraka amin'ny fitaovana vaovao izay ahitana pataloha, jersey, goggles, tank, marika ary loader.
(Nahazo ny loka 5 Gold Level)
Kitapo misy kitapo mitaingina paty, satroka, t-shirt, fanjaitra, pants, jersey, goggles, tank, loader, ary marika.
(Mpandresy Silver Level 5)
Hahazo GIRL SPORTZ ny safidinao.
(10 mpandresy eo amin'ny bronze)
Tadiavo ny T-shirt GI SPORTZ ary ny satroka.
Brigade Fanohanana Brands
© 2018 GI Sportz. Zo rehetra voatokana.